ပ႒ာန္းတရားေတာ္(၁) ပထမဆုံးရုပ်ပြောင်ဂိမ်းအချို့သည်ဂိမ်း၏ဂိမ်းစတိုင်ပြီးနောက်ပုံစံပြုခဲ့ကြသောအခါညစ်ညမ်းဂိမ်း၏အစောပိုင်းကာလများကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိနေသေးသည်။ သို႔ေသာ္မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ေက်ာ္ၾကားမႈမွာတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင္႔ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကိုတိုးျမွင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒီဂန္ထဝင်ကာတွန်းမဟုတ်လျှင်သင်ကျော်တပ်မက်နိုင်အဆုံးမဲ့သားမွေးဇာတ်ကောင်ပူဇော်ဖို့အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းဖျံ? ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ကူးနိုင်သမျှသောဂိမ်းရှိသည်။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ဝက္ဘ္ဆိုက္ဟာဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။, ကျနော်တို့စီးရီးကနေအပေါငျးတို့သပူပြင်းတဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့လာကြ၏။
ဒီစုဆောင်းမှုအတွက်အားလုံးဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်ကြသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဆိုမီးခိုးရောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းမပေးပါဘူး။ ဤဆိုဒ်သည်ဂိမ်းများနှင့်သီးသန့်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမျိုးဆက်သစ်ဟာတိုးတက်မှုကြီးတွေစာရင်းဝင်လာပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်ပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်,ပိုကောင်းအသံနှင့်လည်းပိုပြီးရှုပ်ထွေးဂိမ်းရ။ အဆိုပါစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာလည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပူပြင်းတဲ့ဖန်တီးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,အသစ်စက်စက်ဂိမ်းလုံးဝလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းအဆင်သင့်ရှိပါတယ်,အရာသင်သည်ထိုသူတို့ညစ်ညမ်းများအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာတစ်ခုကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်., ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤဂိမ်းကိုဆက်ကပ်,ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာပြတင်းပေါက်ပေါ်ပြေးလျှင်နေပါစေစမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုဆက်ကပ်,မက်စ်,အိုင်အိုဒင်းသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်မ. ထိုသူတို့အားလုံး၏အကောင်းဆုံးသတင်းကဒီဆိုက်ပေါ်မှာအရာအားလုံးပူးတွဲပါမျှကြိုးနှင့်အတူအခမဲ့သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်.
ဒါကြောင့်ရုပ်ပြောင်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောတိကျတဲ့နယ်ပယ်မှကြွလာသောအခါ,သင်စုဆောင်းခြင်းတော်တော်လေးသေးငယ်ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါ,. နယ်ပယ်လူကြိုက်များအတွက်ကြီးထွားလာသောကြောင့်သို့သော်သင်မှားပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကေစ်းကြက္အတြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာၿပီးေစ်းကြက္အတြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှုအတွက်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှိသည်နှင့်သင်စကြဝဠာကနေခံစားရန်ရှာဖွေနေပါတယ်အဘယျသို့ပေါ်မူတည်.,သင်ဧကန်အမှန်ဂိမ်း၏ညာဘက်စတိုင်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့လိင်တံထောင်မတ်ခြင်း၊ထောင်မတ်ခြင်းဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ သင္သိသမွ်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာျပေပးမည့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ဆရာဆရာမမ်ား၊ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးကိုေမတၱာပို႔သပါသည္။ ပြီးတော့သင်ကသူတို့ကိုခင်မင်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်ကိုစိတ်ကြိုက်သူတဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အတွက်ဂိမ်းရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,ငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးအများကြီးနှင့်အတူလာမယ့်သောပုရစ်စစ်တိုက်ဂိမ်းရှိသည်။ အချို့သောဂိမ်းများတွင်သင်သည်လိင်တိုက်ပွဲများသို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ အခြားသူတွေကဂေးရဲ့လွှတ်ပေးမှုကနေလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအတွင်းမှာလူတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာနေကြပါတယ်။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လူတို႔အားအခမဲ့ပ႐ိုမိုးရွင္းဂိမ္းမ်ားကိုေပးပို႔ေသာဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီးေၾကာ္ျငာအခ်ိဳ႕ကိုေၾကာ္ျငာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္စီမံထားပါသည္။ ဒါပေမယ့်ဒီကြော်ငြာတွေကိုသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို၏လမ်းအတွက်မရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမပေါ့ပ်နှင့်မျှမတို့ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်။ သင်ဂိမ်းတစ်ခုတွင်ကစားခလုတ်ကိုထိလိုက်သောအခါသင်သည်အခြားပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်သင်ဘယ်တော့မျှမမှတ်မိတော့ပါ။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက်ပေါ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားအပေါ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာတောင်းဆိုနေတာသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဘယ်တော့မှအပြင်,ငါတို့သည်လည်းသင်ကစားစတင်သောအခါအဘယ်သူမျှမကသင့်ရဲ့အိုင်ပီကိုသိကြလိမ့်မည်ဘယ်မှာစာဝှက်ထားတဲ့ဆာဗာများရှိသည်။, သင်ပင်အမည်ဝှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးအခမဲ့ဖွင့်နှင့်အစဉ်အဆက်ဖန်တီးအရှိဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအချက်အချာပေါ်တွင်သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်ပါပဲ။ ခံစားကြည့်ပါနှင့်ညတိုင်းပိုပြီးပြန်လာ။